Sheekada filimka Avengers – Infinity War: waa midka ugu wanaagsan ee shirkada Marvel sameyso – Filimside.net
Sheekada filimka Avengers – Infinity War: waa midka ugu wanaagsan ee shirkada Marvel sameyso
Hordhac: Waxaa adag in la sameeyo filim labo ilaa sedex hogaamiye leh oo weliba door adag loo sameenayo bal qiyaas sidee lagu sameyn karaa filim 76-door muhiim ah kasoo muuqanayaan!
Haddaba shirkada Marvel waxay la timid filimkii ugu weynaa ebid caalamka laga sameeyo waana Avengers – Infinity War oo la isugu keenay jilaa kasto iyo door kasto oo caan ah wuxuuna noqday filim caalamka oo dhan qabsaday iskaba dhaaf Hollywood-ka.
Waxaa cajiib ah in door walbo oo Super Hero ah ee Avengers – Infinity War kasoo muuqanayo inuu dunida shacbiyad balaaran ku leeyahay, sidaa darteed waa qasab qof walbo oo caalamka ku nool oo xiiseeyo shirkada Marvel filimadeeda inay waaya aragnimo ahaan u daawadaan Avengers – Infinity War.
Jilaayaasha Filimkan: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Tom Hiddleston, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin, Chris Pratt iyo Peter Dinklage.
Qiimeynta filimkan: 4.5/5 (Afar xidig iyo bar waa filimka ugu wanaagsan ee Marvel sameyso)
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay: Waa wax cajiib badan kooxda filimkan sida ay door walbo usoo bandhigeen weliba door walbo midka kale kama muhiimsano, sida darteed Super Hero-ga aad taageero u yahay kuma niyad jebin doono ee fadlan Infinity War daawo!
Muxuu Ku Liitaa Filimkaan: Dhaliisha yar ee loo haayo kooxda Marvel waxay tahay xoogaa inay yara daahiyeen dulucda filimka in gudaha loo galo micnaha wax yar dhisada ama barista daawadayaasha doorarka kala duwan ayaa lagu daahaa kadib ayaa la guda galaa ujeedka filimkan weyn xambaarsan yahay.
Fariinta Filimka Avengers: Infinity War Oo Kooban: Filimkaan wuxuu ku saabsan yahay sheydaanka weyn Thanos oo doonayo inuu gacanta ku dhigo lixda dhagax ee wax lagu bur buriyo si uu awoodiisa u dhameestiro oo ah inuu dunida barkeeda bur buriyo barka kalena uu maamulo.
Walaalaha Asgardian kuwaas oo dayax gacmeedkii (Thor: Ragnarok) ku wada jireen ayaa doonayaan inay gurigooda kusoo laabtaan laakiin waxaa qabsanaayo ama gacanta ku dhigaayo sheydaanka weyn Thones.
Walaalaha Asgardian (Thor: Ragnarok) oo dhaawac iyo dhibaato badan loo geestay waxay la midoobayaan kooxda guardians of the galaxy si ay kaga taqalusaan sheydaanka dunida jiritaankeeda halista ku ah Thanos.
Dhinaca kale Bruce Banner (Mark Ruffalo) oo isagana ka warqabo halista kasoo socoto Thanos wuxuu la kulmayaa Stephen Strange aka Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) kadibna labadooda waxay gacan weydiisanayaan Tony Stark (Robert Downey Jr.) si ay ula imaadaan sedexdooda qorsho Thanos looga taqalusaayo.
Haddaba waxaa la ogyahay shan meelood oo ay yaalaan shanta dhagax awooda laga helo hal dhagax ayaan la garaneyn halka uu yaalo oo uu doonayo Thanos inuu lixda dhagax gacanta ku dhigo kadibna dunida ku bur buriyo.
Sidaa darteed kooxda Super Hero-ga ah ee awooda kala duwan leh waxay ku midoobayaan sidii ay Thanos isaga dhicin lahaayeen sidaa darteed waxaa dhex mari doono labada dhinac koox is baheesatay iyo sheydaanka wetn Thanos dagaal aan horey loo arag!
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Infinity War Sida Loo Dhigay: Wey adag tahay door walbo in loo cadaalad falo laakiin waxaa cajiib ah in halmar 20-door isku awood laga dhigay sidoo kalena mid walbo kaalintiisa qaadanayo hadana daawadayaasha kuma wareerayaan doorarka faraha badan waayo door walbo awooda uu caan ku yahay ayaa la siiyay.
Infinity War dagaal kaliya ma ahan sidoo kalena wuxuu leeyahay dareen qiiro badan taasi oo ka dhigeyso fariinta filimkaan qayaali kaliya inaysan ahayn oo ay taabaneyso noolasha ama bini aadanka marka ay daawadaan.
Marvel waxay la timid mashruuceeda Super Hero midka ugu weyn uguna wanaagsan wuuna u qalma filimkaan juhdiga iyo qarashka la galiyay madaama si heer sare ah la isugu daba riday fariintiisa.
Labada walaalaha ah Anthony Russo iyo Joe Russo waxay qabteen shaqadii ugu dhibka badneyd ebid filim sameeye la imaan lahaa waayo ma jiro filim sameeye u cadaalad fali karo sidoo kalena xakameyn karo doorar Classic ah oo dunida laga wada jecel yahay laakiin wax walbo sidii la filaayay ka weyn ayay ka dhigeen.
Bandhiga Jilaayaasha Filimka Infinity War: Lama soo koobi karo jilaayaasha caanka ah iyo doorarkooda dhaxalka ah ee filimkaan la isugu keenay balse Robert Downey Jr. as Tony Stark (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (Black Widow), Zoe Saldana (Gamora) iyo Chris Pratt (Star Lord) iyo Tom Holland (Spider Man) mid walbo taageerayaashiisa wixii ay ka filaayeen ka badan ayuu la imaaday.
Laakiin xaqiiqada dhabta ah waxay tahay ayadoo aan soo sheegnay jilaayaasha sare iyo doorarkooda ay caanka ku yihiin haddana filimkaan Infinity War waxaa hadal heyntiisa qaatay Josh Brolin (Thanos) waayo awoodiisa lixaada leh ayaa udub dhexaad looga dhigay filimkaan la isugu yimid weliba door walbo wuxuu la dagalamayaa Thanos waana mida sababtay inuu jilaayaasha oo dhan hadal heynta ka qaato.
Gunaanad: Shirkada Marvel dhamaan taxanaheeda Super Hero-yaasha ah inay isugu keentay Infinity War waxay ahayd halis ay u bareertay laakiin kuma aysan qasaarin madaama mashruucaan noqday mid heer sare ah.
Waa hubaal in Infinity War uu gil gili doono tiyaatarada caalamka weliba siweyn USA Boxoffice iyo suuq walbo oo dunida aflaantiisa laga daawado.
Ugu dambeyntii Infinity War wuxuu ka dhex dhashay 10-sano shaqo ay waday Marvel iyo 18-filim doorarkooda caanka ah la isku keenay waxaana kasoo baxay filim taariikhi ah oo aan marnaba laga xiiso dhigeyn Action ahaan iyo sheeko ahaan waana Avengers: Infinity War.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Avengers: Infinity War:
Waxaa Aqrisay 868